Valo ny tranga vaovao eto Analamanga, tsy nisy ny lavo - ewa.mg
News - Valo ny tranga vaovao eto Analamanga, tsy nisy ny lavo
Miisa 31 ireo tanga vaovao tamin’ny
fitiliana vita miisa 257, araka ny antontanisa, navoakan’ny CCO,
omaly. Avy eto Analamanga ny valo amin’izany raha 10 ny avy any
Diana. Miisa dimy ireo nifindran’ny valanaretina any Vatovavy
Fitovinany ary enina ny any Alaotra Mangoro. Iray avy kosa ny any
Itasy sy any Matsiatra Ambony.
Tsy nisy kosa ny aina nafoy.
Mijanona ho 226 ireo lavon’ny valanaretina eto amintsika
hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Tsy niova koa fa miisa 20 ireo
anaty fahasarotana. Na izany aza, miisa 45 ireo sitrana ka maro
anisa amin’izany ny any Boeny, miisa 15. Tafakatra 14 788
izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana
amin’ireo mitondra ny tsimokaretina miisa16 167. Mbola
maherin’ny 1 000, miisa 1 151, ireo mbola tsaboina sy
arahi-maso ny toe-pahasalamany.
Miisa 68 564 ireo fitiliana PCR
vita raha 7 289 kosa izany ho an’ny fitiliana GenExpert.
L’article Valo ny tranga vaovao eto Analamanga, tsy nisy ny lavo a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 24/09/2020
Mahavatse – Toliara: tratra ry Dame de Pique, jiolahy nokarohina nandritra ny 10 taona
Tratran’ny vela-pandriky ny polisy ireo jiolahy telo tompon’antoka tamin’ny fanendahana pasitera tao Mahavatse Toliara, ny asabotsy lasa teo. Voalazan’ny polisy fa tao an-tranon’ny lehilahy iray antsoina hoe Dame de Pique ao Mahavatse no nahatrarana ireto jiolahy ireto, nomarihin’ny polisy fa isaky ny mahavita ny asa ratsiny ry zalahy ireto no miafina ao amin’io lehilahy io. Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny polisy hatrany, jiolahy nokarohina nandritra ny folo taona ireto jiolahy ireto ary maro ny raharaha mahavoasaringotra azy ireo, toy ny vonoan’olona sy ny halatra isan-karazany. Isan’ny nandray anjara tamin’ny fakana taratasim-bolan’ny beantitra tao Toliara ry zalahy ireto. Efa nifanehatra tamin’ny polisy inefatra izy ireo, saingy tafaporitsaka hatrany. Isan’ny nampikolay ny ao an-tanànan’i Toliara ireto jiolahy ireto ka vola iray hetsy Ar sy firavaka ary entana sarobidy ny lasan-dry zalahy tao amin’ilay pasitera nandritra ny fanafihana. Voalaza fa jiolahy avy aty an-dRenivohitra sy Toliara avokoa ry zalahy ireto sady efa manana trano any Toliara. Nahitana basy mahery vaika koa tany amin’ireo jiolahy ireto.CMS sy J.CL’article Mahavatse – Toliara: tratra ry Dame de Pique, jiolahy nokarohina nandritra ny 10 taona a été récupéré chez Newsmada.
Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF): dimy ny kandidà hifaninanan ho filoha
Hifantohan’ny sain’ny rehetra, taorian’ny lalaon’ny “Can 2019”, natrehin’ny Barean’i Madagasikara, ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Dimy mirahalahy mianaka ny hiady izany toerana izany.Rabekoto Raoul Arizaka, filoha lefitra faharoan’ny federasiona teo aloha. Andriamiasasoa Doda, filohan’ny federasiona nandimby an’i Ahmad. Rakotomamonjy Neypatraiky, filoha lefitra voalohan’ny federasiona teo aloha. Rasoamaromaka Hery, mpitantana ny fanamboarana ny kianja synthètique ary i Mohamad Abdillah, mpitsara baolina kitra iraisam-pirenena. Ireo izy dimy mirahalahy mianaka hifaninana ho filoha hitantana ny federasiona malagasin’ny baolina kitra.Raha zohina, olona efa nilona naharitra ao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra avokoa izy rehetra ireo ary samy nametraka tantara tsara ho an’izany taranja izany avokoa. Samy manana ny vina hampivoarana sy hampiroboroboana ity taranja ankamamian’ny vahoaka malagasy ity avokoa izy rehetra ireo. Efa samy nahazo ny fankatoavan’ireo ligim-paritra araka ny lalàna mifehy ny fifidianana ireo kandidà dimy ireo.Heverina fa tsy misy handiso fanantenana ny mpankafy izay ho lany hitantana izany. Na ireo tsy ho lany aza, tsy maintsy hanome tanana sy hanampy izay ho filoha vaovao eo satria ny baolina kitra no jerena sy iarahana mibanjina fa tsy sanatria fitiavan-tseza. Nisy ireo kandidà efa nitonona ny hirotsaka niala an-daharana ka nanohana kandidà, tamin’ity. Eo koa nefa ireo izay mihazakazaka mirotsaka ho komity mpanatanteraka.Kandidà iray ihany ny tsy afaka nirotsaka tamin’ity, Ramisamanana Lova, filohan’ny fikambanana Alefa Barea. Tsy nisy ligy nanome fankatoavana azy mantsy ka izao izy tsy afaka hilatsaka izao.Tsiahivina fa hotontosaina ny asabotsy 24 aogositra izao ny fifidianana ho filohan’ny federasiona ka handatsa-bato ireo ligim-paritra 22, hifidy ny ho filoha vaovao eo. Tompondaka L’article Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF): dimy ny kandidà hifaninanan ho filoha a été récupéré chez Newsmada.
Imbiki Herilaza : “Voahaja sy narahina ny lalàmpanorenana”
“Nanaraka ny pitsopitson’ ny And. 96 amin’ny lalàm­panorenana ny fampanda­niana iny lalàna iny, nanomboka tamin’ny voalohany ka hatramin’ny farany” hoy ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza. Tsara koa ny mijery fa tsy azo ihodivirana ny fampandehanana ny raharaham-pirenena. Ho tapitra ny janoary 2021 ny fe-potoam-piasan’ny mpikamban’ny Antenimi­eran­do­ho­lona. Milaza koa ny lalàm-pifidianana fa 90 andro farafahelany alohan’ny fifidianana no iantsoana ny mpifidy. Ta­fi­ditra ao anatin’io lalàna 001-2020 io ny didy hitsivolana momba ny Antenime­ran­do­holona na ny didy hitsivolana momba ny fifidianana, samy lasa lalàna. «Nisy ny fiha­onana teo anivon’ny vaomiera iombonana isasahan’ny Antenimiera roa tonta fa tsy nisy ny fitovian-kevitra. Na­nontany ny praiminisitra ny filohan’ny Anteni­mi­eram­pirenena hoe: misy he­vitra hafa tokony hatao sa hiroso amin’ny fifidianana na fankatovana farany ilay volavolan-dalàna ny Antenimi­eram­pirenena?» hoy kosa ny mpahay lalàna, Ranesa Fi­riana. Rehefa nahazo alalana tamin’ny governemanta ny Ante­nimierampirenena, nampihatra ny And. 96 amin’ny lalàmpanorenana mamaritra fa rehefa tsy mifanaraka ny Antenimiera roa tonta, afa-mifidy ny Antenimi­eram­­pi­renena. Heverina ho lany ilay volavolan-dalàna raha lany amin’ny antsasa-ma­nilan’ny solombavamba­hoaka.R. Nd.L’article Imbiki Herilaza : “Voahaja sy narahina ny lalàmpanorenana” a été récupéré chez Newsmada.
Fizarana Vatsy Tsinjo: manampy amin’ny fanisana olona ny miaramila
Taorian’ireny zava-nitranga manoloana ny savorovoro teny anivon’ny fokontany samihafa, ny herinandro teo nandritra ny fizarana ny fanampiana ara-tsosialy avy amin’ny fitondram-panjakana, mirotsaka an-tsehatra eny anivon’ny fokontany ireo miaramilan’ny Bataillon Multi-missions BMM toy ny nataon’ireo minisitera hafa, miaraka amin’ireo tompon’andraikitra amin’ny fanisana ireo mponina isam-pokontany. Natao izao mba hanamorana ny fizarana ny fanampiana avy amin’ny fanjakana. Nomarihin’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena fa ny asa fandaminana ny fandraisana sy ny fanadihadiana isan-tokantrano dia iarahana amin’ny fokontany. Nanomboka ny zoma lasa teo izany ka teny amin’ny fokontany Ambatovinaky no nanombohana izany. Nitohy ny faran’ny herinandro teo ny asa fanisam-bahoaka ka miaramilan’ny BMM miisa 450 no nidina ifotony nanatanteraka izany. Mizara roa ny asa ka misy ireo misehatra manao fanadihadiana eny anivon’ny isan-tokantrano avy, misy kosa ireo mirakitra an-tsoratra izany amin’ny alalan’ny “saisie des données” eny amin’ny minisitera eny Ampahibe.Jean ClaudeL’article Fizarana Vatsy Tsinjo: manampy amin’ny fanisana olona ny miaramila a été récupéré chez Newsmada.
Ho an’ny kilasy «intermédiaire»: tombanana araka ny fahaizany ny mpianatra
Anisan’ny nandrandrain’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, ny alahady alina teo ny fverenana an-tsekoly ho an’ireo mpianatra amin’ny kilasy tsotra tsy manala fanadinam-panjakana (intermediaires). Tsy nasian’ny filoham-pirenena resaka anefa ny mahakasika izany ary nampanontany tena ny rehetra .Omaly antoandro kosa, nitondra fanazavana ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Sahondrarimalala Marie Michelle, fa apetraka amin’ny fahendren’ny talen-tsekoly ny famerenana ny ankizy an-dakilasy. Samy mandray sy manao ny fandrindrana rehetra ny sekoly amin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana.Anjaran’ny sekoly no mandamina sy manao ny tombana ho an’ny mpianatra tsiraitray ao aminy. Arakaraky ny fahaizan’ilay mpianatra no hiakarany kilasy na tsia. Iarahana mijery akaiky amin’ireo mpampianatra izany.Maro amin’ireo sekoly anefa no tena nijanona tanteraka, tsy nanara-maso ny mpianany na dia ampitain-davitra aza noho ny antony maro. Sahirana ny sekoly amin’ny hanaovana tombana satria na ny fandaharam-pianarana aza zara fa vita.Tsy miova ihany koa ny tetiandrom-pampianarana, araka izay voarakitra ao anatin’ny didim-pitondrana nivoaka tamin’ny 21 aogositra 2019. Mifarana ny volana jolay ny fampianarana ary tokony hanomboka ny volana oktobra indray ny taom-pianarana vaovao 2020-2021.Tatiana AL’article Ho an’ny kilasy «intermédiaire»: tombanana araka ny fahaizany ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Kaoperativa roa hafa indray no hanampy ireo namany hampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary. Manomboka ny 15 desambra ho avy izao izany ho an’ireo ao amin’ny kaoperativa Tselatra raha voalaza fa ny 10 desambra kosa ho an’ny kaoperativa Cotral. “Ny tompon’andraikitra eo anivon’ny vondron’ny kaoperativan’ny mpitatitra eto an-drenivohitra na UCTU no manapaka ny tokony hiakaran’ny saran-dalana. Tafiditra ao anatiny ihany koa ny fiakaran’ny vidin’ny solika 50 ariary isaky ny litatra no voalaza”, hoy ny mpamily iray eo anivon’ny kaoperativa Cotral. Ity kaoperativa ity izay ahitana ny zotra 129 mampitohy an’Ambohipo amin’Analakely. Eo ihany koa ny zotra 017 izay mitatitra ireo mpanjifa avy eny Ambohipo mankany Mahamasina. Toy izay ihany koa ny antony ho an’ny kaoperativa Tselatra ahitana ny zotra 146,147, 147 D ary ny 178. Mbola manome fe-potoana hiomanan’ny mpanjifa, araka izany, ireo mpitatitra milaza fa hampi- akatra saran-dalana ireo. Tsiahivina fa tsy nandray saran-dalana tsy feno intsony ny kaoperativa Tselatra taorian’ny fitazonan’izy ireo ny saran-dalana tokana 400 ariary. Mbola nanaiky ny saran-dalana tsy feno kosa ny zotra Cotral sasantsasany. Na izany aza, maro ireo mbola tsy mankasitraka izany fiakaran’ny saran-dalana izany. “Efa zatra ny saran-dalana tokana 400ariary izahay. Tokony tsy hiova intsony satria tsapanay fa sady mahazo tombony ireo mpitatitra noho ny tsy fisian’ny tapa-dalana intsony. Na izany aza, tsy maintsy manaraka izay fandaminana izahay mpandeha”, hoy i Lalao, mponina eny Ambatomaro manjifa ny zotra 147 ao amin’ny kaoperativa Tselatra. Ankoatra ireo efa voalaza ireo, mbola misy ihany ny zotra tsy mbola nanapa-kevitra ny hampiakatra ny saran-dalana 500 ariary. L’article FITATERAM-BAHOAKA :: Mitohy ny fampiakarana ny saran-dalana est apparu en premier sur AoRaha.
Digue : Lehilahy maty nodomin’ny fiara, nitsoaka ny mpamily
Fatin-dehilahy nihosin-drà tanteraka no nitsena ireo olona teny amin’iny lalan’i Digy iny omaly vao maraim-be. Araka ny angom-baovao azo dia lehilahy iray no namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana, ny alin’ny alahady lasa teo. Tsy nijanona anefa ilay fiara nahavanon-doza fa mbola nanohy ny lalany nitsoaka, namela ilay olona voadona teo amin’ny arabe. Tsy fantatra mazava araka izany, hoe tamin’ny fomba ahoana no nahatonga ny loza. Izy efa nitsirara nihoson-drà teo am-povoan’arabe no nanaitra ny maro ary nitangoronan’ireo mponina teny an-toerana. Efa tonga teny an-toerana moa ireo tompon’andraikitra nijery ifotony ny zava-nisy. Ry zareo avy ao amin’ny BMH ihany koa efa nantsoina haka ny razana, ary nitondra izany teny amin’ny trano-patin’ny hôpitaly tetsy Ampefiloha, miandry izay mety ho fianakaviany. Fa ankoatran’io dia mpifankatia nitondra môtô ihany koa no naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ireo tetsy Ampandrana ny alahady antoandro lasa teo. Araka ny voalazan’ireo nanatri-maso dia fiara kely iray teny an-toerana no nifaoka azy roa ireto. Avy any Antsakaviro avy any ilay môtô tamin’io fotoana io, raha nifanena tampoka tamin’ity fiara ity, izay raha ny fantatra hatrany, dia handeha hivily tampoka haka « parking ». Tsy tafajanona araka izany ny môtô nentin’izy roa ireto ary tsy tana ihany koa ny fifandonana. Nandriaka ny rà. Samy vaky loha ireto mpifankatia saingy ilay lehilahy no voalaza hatreto fa toa hoe tena voa mafy ary mbola miady amin’ny fahafatesana. Efa tonga teny an-toerana nanantanteraka ny fizahana ifotony ary nanokatra ny fanadihadiana ihany koa moa ireo tompon’andraikitry ny filaminana teny an-toerana. m.LL’article Digue : Lehilahy maty nodomin’ny fiara, nitsoaka ny mpamily a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Hanao ahoana ihany ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna? Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Ho raikitra amin’ity taona ity ihany sa tsia? Mbola hifampidinihana na hifampierana izany, ka ho hita eo…Tsy lavina: ny teny miakatra, ifampierana; ny teny midina, ifampifehezana. Na izany aza, sao ela fikenona ka ho very fotoana amin’ny fifampidinihana sy fifampierana lava amin’izay mitranga sy atao rehetra? Eny, na eo aza ny hoe; izay lava dinika, lava rariny.Tsy izany ve no anisan’ny ilàna ny fifidianana mpitondra amin’ny fifandimbiasam-pahefana hoe ara-pomba demokratika? Nampidramina fahefana hanapa-kevitra amin’izay efa nofaritan’ny lalàna, hanatanteraka izay fanamby nifidianan’ny vahoaka azy…Mbola miara-dalàna amin’izany koa ny lalàna ifampifehezana sy ifampitondrana, mba tsy hiadian-kevitra avokoa izay mitranga sy atao rehetra; eny, na efa misy sy mazava izao aza ny lalàna: inona no marina na hatao, ny an’iza no harahina sy hotanterahina… ?Na ahoana na ahoana ary na inona na inona mitranga sy atao, tsy ilaozan’izay manan-kambara hatrany: ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Rehefa inona na ahoana no atao sy ilaina ny hoe fifampidinihana, na rehefa iza no miteny, henoina… ?Anisan’ny mety hahatonga ahiahy tsy ihavanana izay, rehefa tsy ny lalàna misy no hajaina sy hampiharina ary tanterahina avy hatrany? Tsy inona fa hoe kajikajy sy paipaika politika, araka ny ahiahy noho ny tsy fahatokisan-tena mahazatra ny sasany hatramin’izay.Saika ambonin’ny lalàna mandrakariva ny dinika politika? Na mahatapi-dalan-kaleha, sanatria, ny lalàna, ka voatery hitadiavam-bahaolana hafa tsy fidiny amin’ny fifampidinihana sy fifampierana… politika. Tonga amin’izany ve ny toe-draharaha amin’izao?Raha tiana ny hanova tokoa ny fomba fanaovana politika, tsy anisan’ny fototra sy voalohany amin’izany ve ny fanajana sy fampiharan-dalàna, ny fisaraham-pahefana, ny tsy fanavahana raha misy sy tsy azo ihodivirana ny hoe fifampidinihana sy fifampierana…?Rafaly Nd. L’article Lalàna… tsy mahatapi-dalan-kaleha a été récupéré chez Newsmada.
Maroantsetra: tratra ny lehilahy iray saika hivarotra basy any Ambilobe
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSPD Maroantsetra, ny faran’ny herinandro teo, ny lehilahy iray nahatrarana basy vita gasy miisa dimy. Nahazo loharanom-baovao mialoha ny polisy fa misy lehilahy iray monina ao amin’ny fokontany Ankiakabe, kaominina ambanivohitr’i Maroantsetra no milaza fa manana basy vita gasy maromaro ka mitady mpividy izany izy. Ny fanadihadian’ny polisy koa no nahafantarana fa noho ity lehilahy ity tsy nahita mpividy dia nanana eritreritra ny hitondra ireo basy ireo any Ambilobe izy ka ao indray no hivarotra izany. Manoloana izany indrindra, nandray andraikitra avy hatrany ny polisy ka nanao ny famotorana momba izao raharaha fikasana hivarotra fitaovam-piadiana izao. Nahitam-bokany izany satria, ny alahady teo amin’ny 12 ora antoandro, tratra tao an-tranony ao Ankiakabe ity lehilahy ity. Nosavaina teo anatrehan’ny sefom-pokontany ao an-toerana ny trano fonenany ka basy vita gasy miisa dimy no tratra niaraka tamin’ny fitaovana fanapahana vy miisa roa. Nogiazan’ny polisy ireo fitaovana ireo ary nentina nanaovana famotorana kosa ity lehilahy ity.Jean ClaudeL’article Maroantsetra: tratra ny lehilahy iray saika hivarotra basy any Ambilobe a été récupéré chez Newsmada.
Haintrano teny Manarintsoa Atsinanana: maherin’ny 700 ireo traboina, olona roa naratra
Nahatratra 740 isa ireo traboina vokatry ny haintrano goavana tetsy Manarintsoa Atsinanana, ny asabotsy atoandro teo. Hatreto, olona miisa roa ihany koa naratra vokatr’izany, raha ny voalazan’ny minisiteran’ny Mponina. Voalaza fa fianakaviana 145 ireo may trano. Ao anatin’izany ireo hazo marobe hotohoton’ny afo sy ireo trano biriky may ihany koa. Taorian’ny loza, tonga nijery ireo traboina ny minisiteran’ny Mponina. Nanolotra fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana ny minisitera sy ny BNGRC. Niaraka aminy ny kaominina Antananarivo Renivohitra, ny Croix Rouge, ny lehiben’ny distrika ary ny solombavambahoaka. Tao anatin’izany ny lamba firakotra, ny fanampin-tsakafo sy ny kojakoja fampiasa andavanandro.Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa niainga tamina trano hazo iray teny an-toerana ny afo ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 12 ora. Niitatra tamin’ireo trano teny amin’ny manodidina anefa ny fahamaizana vokatry ny fitsoky ny rivotra. « Nandritra io fahamaizana io, nahatratra 65 ireo trano hazo may, nisy koa ireo trano biriky simba vokatr’izany », hoy ny fanazavan’ny lietnà kolonely Razafimanahaka Tiana, lehiben’ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalàna. Fantatra fa manodidina ny dimy eo ireo trano biriky may raha roa kosa ny simba tanteraka.Sarotra ny famonoana ny afoNanano sarotra ny famonoana ny afo. « Mifanakaiky avokoa ireo trano, eo koa ny fahateren’ny lalana sy ny fahalaviran’ny “bouche d’incendie” », hoy hatrany ny lehiben’ny mpamonjy voina. Nambarany fa naharitra ora roa ny famehezana ny afo, levona tanteraka kosa izany tokony ho tamin’ny 5 ora latsaka fahefany hariva.« Efa niredareda be ny afo ary natao faran’izay haingana ny famoahana ny entana rehetra tao an-trano. Maro amin’ireo entanay ny simba, nisy ny natsipy teny am-baravarakely. Misy koa ireo natsipy tao amin’ny lakandranon’Andriantany », hoy ny fanazavan’i Jaona, isan’ireo traboina. Nambarany fa sarotra koa ny fidirana tamin’ireo trano may ka kilan’ny afo avokoa ny ankamaroan’ireo entany. « Ny akanjo ety an-koditro sisa hany ananako », hoy hatrany ny fitarainan’ilay raim-pianakaviana.Niara-niisalahy ny mponina eny an-toerana namono ny afo, nisy ireo nitatitra ny ranon’Andriantany ho famonoana izany. Ireo mpamonjy voina kosa, niezaka namono ny lelafo sy nifehy izany. Henintsoa HaniL’article Haintrano teny Manarintsoa Atsinanana: maherin’ny 700 ireo traboina, olona roa naratra a été récupéré chez Newsmada.
Karate-Afrika “kata en ligne”: mbola hiatrika fampiofanana ireo voatsonga hifaninana
Raha ny vinavinan’ny Union des fédérations africaines de karate-do”, hatao ny 13 hatramin’ny 30 novambra izao, ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika “kata en ligne”, sokajy latsaky 14 taona. Vita, omaly, ny fiofanana nomena ireo mpikatroka malagasy, nakana izay hisolo tena an’i Madagasikara, amin’ity fifaninanana ity. Fiofanana nandritra ny roa andro, nahitana ny talentan’ny karateka tsirairay, valo hatramin’ny 14 taona. Araka ny fantatra, miisa efatra isaky ny sokajy ny voatsonga ka mbola homena fiofanana manokana, mialoha ny hakana horonantsary azy ireo, hifaninanana amin’ny mpikatroka manerana an’i Afrika, amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra.Nambaran-dRazafindrakoto Miora, mpandrindra sady mpitsara, fa tafiditra anatin’ny tanjon’ny Ufak izao programa izao, ahafahana mampiseho ny talentan’ny mpikatroka, indrindra ny sokajin’ny ankizy. Hetsika maro ny hotontosaina ka isan’izany ity fiofanana ho an’ny ankizy ity sy ny fikarakaraka fifaninanana hampitain-davitra. Hisy ny fiofanana hampitain-davitra ho an’ny mpitsara, sahanin’ny komisionan’ny mpitsara sy ho an’ny mpanazatra, sahanin’ny komisiona teknika, raha ny fandaharam-potoana manaraka.Tsiahivina fa voatendry ho filohan’ny Union africaine de karate-do”, faritra Atsinanana, ny filohan’ny federasiona malagasy ny karate, Andrianaivomanana Solofonirina Barijaona, ny herinandro lasa teo. Mi.RazL’article Karate-Afrika “kata en ligne”: mbola hiatrika fampiofanana ireo voatsonga hifaninana a été récupéré chez Newsmada.
Fandriampahalemana: hanampy ny tafika ana habakabaka ny firenena japoney
Nihaona tamin’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika ana habakabaka, ny Jly Radona Ratiarivelo Ellis, teny Ambohidahy, ny masoivoho japoney, i Higuchi Yoshihiro, omaly. Nisaotra manokana ity manamboninahitra ity ny masoivoho japoney noho ny fandraisana mahafatra-po natao azy. Voaresaka nandritra ny dinidinika ny hanatevenana ny fiaraha-miasa ara-tafika, indrindra ny mahakasika ny tafika ana habakabaka. Nambaran’ny masoivoho japoney fa samy Nosy i Madagasikara sy i Japon ary samy mitantana fari-dranomasina. Noho izany, niomana tamin’ny fahafahan’ny Tafika ana habakabaka mandray anjara feno amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana an-dranomasina ny resaka nifanaovan’izy ireo. Nohamafisin’i Higuchi Yoshihiro koa fa nahafaly sy nahafa-po azy ny hetsika sy ny firotsahana an-tsehana mivantana nataon’ny tafika nandritra ny ady amin’ny valanaretina Covid-19.Jean ClaudeL’article Fandriampahalemana: hanampy ny tafika ana habakabaka ny firenena japoney a été récupéré chez Newsmada.